Sarintany amin'ny mizana miavaka | Fiaretana haran-dranomasina
Ny fahasarotan'ny fitantanana ny haran-dranomasina dia matetika tonga amin'ny olana lehibe.
Ny paikadim-pitantanana sy ny drafitra fitantanana dia ampifanarahana amin'ny velaran'ny velaran'ny faritra ahina, manomboka amin'ny fandraisana andraikitra isam-paritra ka hatramin'ny tetik'asa eo an-toerana. Ny fampahalalana hanohanana ireo ezaka ireo dia tokony hitovy refy amin'ny sehatry ny fandalinana.
Ny fanontaniana voalohany sy lehibe indrindra momba ny fitantanana ny haran-dranomasina, amin'ny lafiny rehetra dia ny hoe "Aiza ny vatohara?", Arahin'ny "faritra inona no rakotra azy?" ary "Ohatrinona no voaaro?". Na izany aza, olana momba ny fitantanana maro no mitaky fampahalalana amin'ny an-tsipiriany kokoa, toy ny fonon'ny haran-dranomasina velona, ​​ny fahasarotan'ny firafitry ny haran-dranomasina, na ny biodiversity an'ny haran-dranomasina. Mba hahazoana an'ity vaovao ity dia ilaina ny fitaovana mahatsapa lavitra miaraka amin'ny fahafahany manoratra ny mari-pamantarana tokana momba ny rakotra vatohara velona ary miaraka amin'ny fikajiana habakabaka avo lenta ahafahana misambotra zanatany haran-dranomasina tsirairay.
Ireo fitaovana an-tsarintany aseho eto dia ny lohahevitry ny lesona 2: Fampiasana ny Allen Coral Atlas sy ny lesona 3: Fandaharana an-tsarintany marobe amin'ireo haran-dranomasina any Karaiba amin'ny làlan'ny Internet misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahatsapana lavitra sy fanaovana sarintany lavitra momba ny fiarovana ny haran-dranomasina.